बाह्र चेलाहरूको पुनर्विलोकन र मत्थियास – Word of Truth, Nepal
बाह्र चेलाहरूको पुनर्विलोकन र मत्थियास
हामीले बाह्र चेलामध्ये एक-एकको अध्ययन गरिसक्यौं। अब ३५ ओटा प्रश्नहरूको जवाफ लेखेर त्यसको पुनर्विलोकन गर्नेछौं —
कुन चेलालाई “जेलोतेस” भनिन्थ्यो? _____________
कुन चेलाले पत्रुसलाई प्रभुकहाँ ल्याए?_____________
कुन चेला येशूप्रति एकदम बफादार थिए तर परिस्थितिको सँधैं अँध्यारो पक्षलाई मात्र हेर्ने गर्थे? _____________
कुन चेला पानीमाथि हिँडे? ____________
कुन दुई चेलाहरूलाई “गर्जनका पुत्रहरू” भनिन्थ्यो? __________, ___________
कुन चेलाले नयाँ नियमको एउटा पुस्तक लेखे? _________
तीनजना मछुवा चेलाका नामहरू लेख्‍नुहोस्: __________, __________, ___________
“येशूले प्रेम गर्नुभएको चेला” को थिए? _________
शङ्कालु चेला को थिए? _________
कुन चेला कर उठाउने मान्छे थिए? _________
“भित्री घेरा” का तीनजना चेला को को थिए? ________, __________, __________
कुन चेला येशूको सबभन्दा नजिक रहन्थे? _________
माल्खसका कान काटिदिने चेला को थिए? _________
कुनै चेलाले नयाँ नियमका पाँचओटा पुस्तकहरू लेखे? _________
कुन चेलाले नथनएललाई प्रभुको विषयमा बताए? _________
जब्दीका छोराहरू को-को थिए? _________, _________
बाह्र चेलाहरूमध्ये दुई जोडी दाजुभाइ थिए। उनीहरूको नाउँ लेख्नुहोस्: ___________ र __________ ___________ र __________
बार्थोलोमाइको अर्को नाउँ के थियो? ___________
कुन चेलाले नयाँ नियमका दुइटा पुस्तकहरू लेखे? ________
कुन चेला “धोकेबाज” भनेर चिनियो?______________
तीन जोडी चेलाहरूको एउटै-एउटै नाउँ थियो। ती तीनओटा नाउँहरू लेख्नुहोस्:_____________ ______________ ______________
कुन चेलाले आफ्नो प्रभुलाई तीन पल्ट इन्कार गरे? _______
“विनाशका पुत्र” कुन चेला थिए? ______________
कुन दुई चेलाहरू बिलकुलै विपरित थिए र जोहरू प्रभु येशूबिना एकअर्काको शत्रु हुनेथिए? _______, _________
कुन चेला सबभन्दा पहिले मारिए (सहीद बने)? ________
बौरिउठाइको पहिलो विहान कुन दुईजना चेलाहरू अरू चेलाहरूसित उपस्थित थिएनन्? _________, __________
“अल्पज्ञात चेला” मध्ये दुईजनाका नाम लेख्नुहोस्: _________, __________
कुन चेलाको नाउँको अर्थ “परमेश्वरको प्रशंसा होस्” भन्ने थियो? __________
“अशुद्ध” चेला कसको नाउँ थियो? __________
क्रूसकै फेदीमा कुन चेला उपस्थित थिए? __________
कुन चेलाले आफूलाई गरिबको वास्ता गर्ने जस्तै देखाउँथ्यो? __________
कुन चेला बोल्न र गर्न प्रायः पहिला हुन्थे? __________
थद्देयसको अर्को नाउँ के थियो? __________
पेन्टेकोस्टको दिनमा कसले प्रचार गरे? __________
चेलाहरूमध्ये “कोषाध्यक्ष” को थिए? __________
प्रभुलाई धोका दिने चेला यहूदाको मृत्युको बारेमा बाइबलले केवल दुइटा ठाउँमा मात्र बताएको छ। यसबाट केही कुरा सिक्नका लागि हामी ती दुवै खण्डलाई अध्ययन गर्नेछौं।
पहिलो खण्ड— मत्ती २७:३-५
के यहूदाले आफूले गल्ती गरेको कुरा जानेका थिए (मत्ती २७:३-४)? ________। के उनले आफ्नो पाप महसुस गरेका थिए? _______। यहूदाले गल्ती स्वीकार गर्दा के यहूदी धर्मगुरुहरूले त्यसको मतलब राखे (मत्ती २७:४)? ________।यहूदाले कुरा त ठीकै भनेका हुन् (“मैले __________ गरेको छु” (मत्ती २७:४) तर उक्त कुरा भन्नका लागि उनी ठीक व्यक्तिकहाँ गएनन् (मत्ती २७:३)। मुख्य पुजाहारीहरू र धर्मगुरुहरूकहाँ उनी जानुपर्ने होइन। ख्रीष्टलाई क्रूसमा टँगाउने काममा उनीहरू समेत दोषी थिए।यहूदा जसकहाँ गए उनीहरू यहूदाका समस्याका बारेमा कुनै चासो राख्ने खालका व्यक्तिहरू थिएनन्।उनीहरू पनि ठूला पापीहरू थिए; उनीहरू यहूदालाई मद्दत गर्न असमर्थ थिए।
समस्या पर्दा आफ्नो समस्या लिएर ठीक व्यक्तिकहाँ जानु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गणितको गृहकार्यमा कठिनाइ पर्दा कसलाई गुहार्नु राम्रो होला? गणितमा थोरै अङ्क ल्याउने साथीलाई गुहार्नु राम्रो होला? __________। सायद आफ्नो गणित शिक्षकलाई गुहार्नु नै सबभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ।पापको समस्याको सवालमा गुहार गर्न सक्ने एउटै मात्र व्यक्ति को हुनुहुन्छ (हिब्रू ७:२५; प्रेरित ४:१०-१२)? _______________________। परमेश्वरकहाँ नजानु यहूदाको घातक भूल थियो। उनले परमेश्वरलाई यसरी गुहार्न सक्थे, “प्रभु, मैले पाप गरें! ममाथि दया गर्नुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्!” मुक्तिका लागि प्रभुको नाउँलाई पुकार्ने हरेक व्यक्तिलाई कुन कुरा दिने प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको छ (रोमी १०:१३)? ___________________________________________। के यहूदाले कहिल्यै त्यसरी पुकारे? __________। उल्टो उनी निस्केर गए र ___________ ______________ (मत्ती २७:५)।
यस पदअनुसार यहूदाको मृत्युलाई कसरी बयान गरौं (ठीक जवाफमा चिन्ह लगाउनुहोस्)?
यहूदाको मृत्यु एक हत्या थियो।
यहूदाको मृत्यु एक आकस्मिक दुर्घटना थियो।
यहूदाको मृत्यु एक आत्महत्या थियो।
यहूदा वृद्ध भएर सामान्य ढङ्गमा मरे।
मान्छे कसरी झुण्डिएर मर्छ? सामान्यतया घाँटीमा डोरी बेरेको कुरा हामी सोँच्दछौं। जस्तै, रूखमा झुण्डिने व्यक्तिले डोरीको एक छेउ हाँगामा बाध्न सक्छ र अर्को छेउले आफ्नो घाँटीलाई बेर्न सक्छ र आफूलाई झुण्ड्याउन सक्छ। यहूदा झुण्डिएर मरेको बताइएको छ तर उनले आफूलाई झुण्ड्याए भन्ने कुरा हामीलाई बताइएको छैन।
दोस्रो खण्ड — प्रेरित १:१५-१८
प्रेरित १:१८ लाई ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। के यस पदले यहूदा मरेको कुरा गरेको छ? ______।के यस पदले झुण्डिएर मरेको कुरा गरेको छ? ______। यस पदअनुसार यहूदा भयङ्करसित खसेको थियो, र त्यसरी खस्दा उसलाई ठूलो चोट लागेको थियो। अर्को अनुवादमा यस पदलाई यसरी लेखिएको छ, “अनि उँधोमुन्टो खसेर उसको बीचतिर फुट्यो र उसको सबै आन्द्राभुँडी निस्केर बाहिर आयो।” ऊ खस्दा उसको शरीर बीचमा फुटेको थियो।
सामान्यतया मान्छे झुण्डिएर मर्दा (वा झुण्ड्याइँदा) आन्द्राभुँडी नै बाहिर निस्कने गरी निजको शरीर बीचतिर फुट्ने गर्दैन। झुण्डिएर मर्दा शरीर कतै पनि फुट्ने गर्दैन। यहूदालाई भएको घटना ज्यादै असाधारण थियो भन्ने देखिन्छ।
अब बाइबल विश्वास नगर्ने एउटा व्यक्तिलाई विचार गरौं। मानौं उसले मत्ती २७:५ र प्रेरित १:१८ पढ्दछ। यी दुइटा पदहरूलाई तुलना गरेपछि उसले यसरी भन्न सक्छ: “यी पदहरूले बाइबल सत्य छैन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ। मत्तीले भन्छ यहूदा एउटा तरिकाले मर्‍यो, प्रेरितमा ऊ अर्को तरिकाले मरेको कुरा छ। यी पदहरू आपसमा विरोधाभासपूर्ण छन्। दुवै सत्य हुन सक्दैन। यदि यहूदा साँच्चै झुण्डिएर मरेको हो भने प्रेरितको बयान सत्य हुन सक्दैन। यदि यहूदा खसेर मरेको हो भने, मत्तीको बयान सत्य हुन सक्दैन।”
उपर्युक्त सोचाइ किन त्रुटीपूर्ण छ? के बाइबल साँच्चै विरोधाभासपूर्ण छ त (यूहन्ना १७:१७)? के मत्ती २७:५ सत्य छ? ___। के प्रेरित १:१८ सत्य छ? ___। समस्या बाइबलको होइन। समस्या छ त उल्लेखित घटनाबारे हाम्रो ज्ञान सीमित हुनुमा छ। घटना घट्दा घटनास्थलमा हामी उपस्थित थिएनौं, त्यसैले हामीसित आवश्यक जानकारीको अभाव छ। यी दुई पदले जे बताएका छन् त्यति मात्र हामीलाई थाहा छ। यहूदाको नराम्रो मृत्युको घटना हामीले आफ्नै आँखाले देखेका भए यी दुवै पदहरू कसरी सत्य छन् भनेर हामीले सजिलै बुझ्न सक्नेथ्यौं। यहूदाले आफूलाई झुण्ड्याएकै हो र यहूदा भयङ्करसित खसेकै हो जसको कारण उसको शरीर फुटेको थियो।
घटनाको सम्भाव्य रूपको एउटा परिकल्पना भने हामी गर्न सक्छौं। के सम्भव छ भने यहूदाले आफूलाई झुण्ड्याउन खोज्दा या त डोरी चुँडिएर या त डोरी बाँधिएको हाँगा भाँचिएर ऊ झुण्डिएको अवस्थाबाट बेसरी तल खसेको हुन सक्छ, र सम्भवतः कुनै तिखो बस्तु जस्तै तिखो ढुङ्गामाथि बजारिएको हुन सक्छ। यदि यस्तै भएको थियो भने मत्ती र प्रेरित दुवैमा सत्य कुरा बताइएको छ भनेर बुझ्न हामीलाई कुनै कठिनाइ पर्दैन।
मत्ती २७:५ बाट हामी जान्दछौं यहूदाले आफैलाई झुण्ड्याए, तर सजिलैसित झुण्डिएर मर्छु भन्ने यहूदाको सोचाइभन्दा घटना निकै बेग्लै किसिमको हुन गयो। आफ्नो जीउको बीचतिर फुट्ने किसिमले खस्नेछु भनेर उसले सायद सोचेकै थिएन। यहूदाको मरणमा परमेश्वरकै हातको काम भएको देखिन्छ। यहूदालाई सजिलैसित झुण्डिएर मर्न दिनुभएन। यहूदाले सोचेको भन्दा बिलकुलै फरक घटना हुन गयो। परमेश्वरले उसको खराब जीवनलाई खराब मरणमा अन्त गराई छाड्नुभयो।
यहूदाको डरलाग्दो मरणचाहिँ त्योभन्दा पनि ज्यादै डरलाग्दो कुराको चित्रण हो भनेर हामीले बिर्सनुहुँदैन। यहूदाको “शारीरिक” मरण त्यति डरलाग्दो थिएन। शरीरमा यहूदालाई सायद एकछिन मात्र कष्ट भयो र त्यसपछि अन्त भइहाल्यो। तर यहूदाको शारीरिक मरण त उसलाई अनन्त कष्टभित्र पुर्‍याउने केवल प्रवेशद्वारा मात्र थियो। यहूदा परमेश्वरदेखि अलग पारिनेछ र _________ को ______भित्र (प्रकाश २०:१४-१५) परमेश्वरको सजाय भोग्नेछ। यहूदाको जीवन र मरण हामी एक-एकको लागि एउटा गम्भीर चेताउनी होस्। तपाईंले आजसम्म मुक्ति पाउनुभएको छैन भने तपाईंले पनि यहूदाले जस्तै अनन्त कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ, यदि ढिलो हुनुभन्दा अगावै तपाईं मुक्ति पाउनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टकहाँ आउनुभएन भने।
सोफोक्लीज (Sophocles) को एन्टिगोनी (Antigone) शीर्षक गरेको युनानी वियोगान्त (दुःखान्त) नाटक (Greek tragedy) मा एकजना राजद्रोहीलाई दण्डस्वरूप एउटा रूखमा उसको लाश पूरै नाश नहोउञ्जेल झुण्ड्याइन लगाइएको थियो। क्रेअन राजा (उसको काका) ले उसको शरीरलाई गिद्धहरू आएर खाओस् भनी रूखैमा झुण्ड्याइराख्न आदेश दिएका थिए। उसले आफ्नो दाजुको शासनको विरुद्धमा गृह युद्धको घोषणा गर्ने लज्जाजनक काम गरेकोले उसलाई यस्तो लज्जाजनक मृत्युदण्ड दिइएको थियो। त्यस्तै गरी यहूदा उसको शरीर बिग्रने गरी मर्ने कार्यले एकजनाको “विनाश” को वियोग (दुःख) कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई छाप पर्ने किसिमले चित्रण गरिएको देखिन्छ।
यहूदाको उदाहरणले विश्वासघाती जोसुकैप्रति सहानुभूति राख्ने कामलाई निरुत्साहित पार्दछ।
प्रभु येशूले शुरुमा १२ जना चेला अथवा प्रेरितहरू चुन्नुभएको थियो। यिनीहरूमध्ये एकजनाले प्रभुलाई धोका दियो र आफूलाई झुण्ड्याएर आत्महत्या गर्‍यो।अब ११ जना मात्र बाँकी भए। रिक्त भएको स्थानमा कसैलाई राखिनु आवश्यक थियो। यहूदाको सट्टामा कोही हुनु आवश्यक थियो, उसको स्थान कसैले ओगट्नु आवश्यक थियो (हेर्नुहोस् प्रेरित १:२०)।
मत्ती १९:२८ पढ्नुहोस्। के प्रभुले भविष्यमा यीमध्ये एउटा सिंहासनमा यहूदालाई बसाल्नुहुन्छ होला? _____________। ११ जना मात्र नभएर १२ जना प्रेरितहरू हुन किन आवश्यक थियो भनेर बुझ्नलाई के यस पदले हामीलाई मद्दत गर्छ? _________। प्रकाश २१:१४ पढ्नुहोस्। त्यस अनन्त शहरको पर्खालमा के यहूदाको नाउँ लेखिएको भेटिनेछ होला? ____________। यहूदाको सट्टामा एकजनालाई प्रतिस्थापन गरिनु आवश्यक थियो भनेर के यस पदले पनि हामीलाई प्रस्ट पार्छ? __________
चेलाहरूका त्यस समूहमा एउटा स्थान रिक्त भएको थियो जसको आपूर्ति गरिन आवश्यक थियो। यदि नेपालको प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा वा उहाँले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनुभएमा, त्यहाँ एउटा आपूर्ति गरिनु पर्ने रिक्त स्थान हुँदैन र? __________। यहूदा प्रभु येशूको प्रेरितको रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा चुनिएका थिए। यस पदबाट उनी पतन भएपछि एकजना प्रतिस्थापन गर्ने व्यक्तिको खाँचो पर्‍यो। उक्त व्यक्ति को थिए?
परमेश्वरको रोजाइलाई पत्ता लगाउने काम
पत्रुसले बुद्धिमत्तापूर्वक यहूदाको प्रतिस्थापन गर्ने व्यक्ति प्रभुको सार्वजनिक सेवाकार्यको शुरुदेखि अन्तसम्मै चेलाहरूसित आवद्ध रहेको व्यक्ति होस् भन्ने प्रस्ताव राखे, “यूहन्नाको __________देखि शुरु गरेर उहाँ हामीबाट __________भएको दिनसम्म” (प्रेरित १:२२)।
उक्त व्यक्तिले बौरिउठ्नुभएका प्रभुलाई देखेको पनि हुनुपर्थ्यो जसले गर्दा ऊ उहाँको बौरिउठाइको ________ हुन सक्थ्यो (प्रेरित १:२२)। यी योग्यता भएका कतिजनालाई भेट्टाउन सकियो (प्रेरित १:२३)? __________। तिनीहरूका नाउँ के-के थिए? ________________ ________________
यीमध्ये कसलाई परमेश्वरले यहूदाको सट्टामा हुनलाई चुन्नुभएको थियो? ________________। परमेश्वरको रोजाइमा को थियो भनेर उनीहरूले कसरी पत्ता लगाउन सके? उनीहरूले गरेको सबैभन्दा पहिलो काम के थियो (प्रेरित १:२-२४)? ___________________। ठीक रोजाइ गर्न सक्ने सबभन्दा योग्य व्यक्ति परमेश्वर स्वयं हुनुको कारण के हो (प्रेरित १:२४)? ______________________________ _____________________________
त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो गोला हाले। गोला हाल्ने कामचाहिँ पैसाको सिक्का वा गोट्टी प्रयोग गर्नुजस्तै थियो। यसरी छनोट कार्य गर्नुचाहिँ भाग्य वा संजोगमा भर पर्ने तरिका अपनाएजस्तै देखिन्छ, तर कतिपटक पुरानो नियमको समयमा परमेश्वरको कार्यद्वारा गोलाको परिणाम उहाँकै इच्छाबमोजिम हुन जान्थ्यो (हेर्नुहोस् योना १:७ र १ शमूएल १४:४२)। हितोपदेश १६:३३ ले यस कुराको बयान गर्दछ: “काखमा __________ हालिन्छ; तर त्यसको पूरा परिणाम __________ बाट आउँछ।” मान्छेले सिक्कालाई हावामा फ्याँकेर हेर्ला वा गोट्टीलाई भुइँमा गुडाएर हेर्ला, तर सबै कुरा परमेश्वरको सुपरीक्षणभित्र पर्दछ र गोट्टी र सिक्काले के देखाउँछ भन्ने कुराको निर्धारण उहाँले गर्नुहुन्छ। पत्रुस र चेलाहरू भाग्य वा संजोगले होइन प्रभुद्वारा डोर्‍याइएका थिए।
गोला कुन व्यक्तिको नाउँमा पर्‍यो (प्रेरित १:२६)? ___________। यस व्यक्ति १२ औं प्रेरितमा गनिए, यहूदाको प्रतिस्थापकको रूपमा। यस व्यक्तिलाई यही प्रेरित १ अध्यायमा मात्र उल्लेख गरिएको छ। यहाँ लेखिएको कुरा बाहेक उसको विषयमा हामीलाई अरू कुनै पनि जानकारी छैन।
पेन्टेकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभएपछि विश्वासीहरूले गोला हालेर निर्णय गरेको कुरा नयाँ नियममा कहीँ पनि भेटिँदैन किनभने नयाँ नियमका विश्वासीहरूलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरको ज्यादै विशेष र व्यक्तिगत अगुवाइ मिल्दछ (रोमी ८:१४ पढ्नुहोस्)।
हरेक दिन हामी प्रत्येकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। याद राख्नुहोस्, के रोज्ने भनेर हामीलाई थाहा नहुँदा, परमेश्वरलाई राम्ररी नै थाहा हुन्छ! हामीले भविष्यमा देख्न नसक्दा परमेश्वरले राम्ररी नै देख्न सक्नुहुन्छ। के गर्ने भनेर हामीले नजान्दा, परमेश्वरले राम्ररी नै जान्नुहुन्छ। निर्णयहरू गर्दा सधैं हामीले तलको महत्त्वपूर्ण त्रिभुजलाई याद गर्ने गरौं:
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 19:18:452020-04-28 14:39:42बाह्र चेलाहरूको पुनर्विलोकन र मत्थियास
यहूदा इस्करयोतीयाकूब र प्रभुका अन्य भाइहरू